Microsoft Win 10 Pro 64bit OEM Version muna French
● French Version chokugadza activation kubudikidza internet, inotsigira yepamutemo updating online.
● Real OEM shanduro zvinovimbisa, inowirirana 64bits maitiro, shanda zvizere zvaisanganisira
● French ane Security pakavha, Made in USA, Made in Ireland, Made in Singapore, etc
Lead nguva: 24 Hours
Kutongwa Order: Support
1.Windows 10 unokupa zvakanaka ruzivo kutanga kutsanya uye kuwana zvinhu
2.Windows mhoro ari pasiwedhi isina chiratidzo-kuti anokupa uchitsanya, zvikuru yakachengeteka nzira dzokuzarura yenyu Windows mano
3.Windows 10 Anoendesa dziviriro nzwisisika - kusanganisira antivirus, firewall, Internet kudzivirirwa, uye zvakawanda
Bitlocker Data encryption uye kudzivirirwa rubatsiro kuchengeta wako mashoko yakachengeteka
4.Hyper-vs. functionality anokubvumira kusika rakapotsa michina, apo kure pakombiyuta unokubvumira danda kubva yakasiyana kombiyuta
Title: Windows 10 Pro USB Full Version 64Bit Chirungu-International
Words Key: mawindo 10 uchishandisa hurongwa; kuhwina 10 aifarira rizere Version
Windows 10 Pro Operating System: Remote-nerogi mukati, pachako-digital mubatsiri, uye kukwanisa kumhanya akawanda rakapotsa desktops kuchakubatsira kuwedzera yauinayo. Swederai kana kunyora web mapeji uye kugoverana navo sezvo customized manotsi. Kana kuti nguva kuzorora, unogona kwariri Xbox Imwe kugutsikana kwako Windows 10 PC, tablet, kana piritsi.
Tora manotsi itsva Microsoft Edge padandemutande Browser
Swederai, pfungwa, kana kunyora zvakananga pamusoro-web page Via munhu touchscreen kana mbeva, siya zvawakanyora nevamwe.
Gadzirisa mashoko Start Muterere
Sarudzai kuratidza kwako zvikuru kushandiswa kana ichangobva akawedzera Apps, zvakananga folders, kana maitiro Kurongwa.
Mhanyai vakawanda anodawo enyika rimwe PC
Kusika rakapotsa michina pamwe Hyper-V kumhanya kupfuura imwe uchishandisa hurongwa panguva iyoyowo. (Hyper-V zvinoda 64-ikakuruma hurongwa pamwe SLAT nezvaanogona uye yokuwedzera 2GB RAM.)
Log in ari kure pamwe Remote Desktop
Log kupinda Windows 10 Pro pamba, kubasa, kana kuti patinenge tichifamba. (Indaneti nerimwe; ISP mari anogona kushandisa.)
Kuwana mudziyo wako achishandisa fingapurindi wako, chiso, kana maziso
Sarudza Windows 10 Namano Windows Hello richacherechedza chenyu anokiyinura pasina kudikanwa password. (Kunoda fingapurindi muverengi, kana neIri kana biometric Switch.)
Sefa kujairana aenderane mano ako
Onscreen wezwi anoshandura chimiro kubvumira kuti nyore kufamba, uye Apps pamwero yakasiyana-siyana-kadikidiki nezvingoro.
Kuwana samambure yako
Windows 10 Pro richibatanidza wako mabhizimisi kana chikoro umambo kuwana pomumbure mafaira, servers, vaidhinda, uye zvakawanda.
Play Xbox One mitambo musi Windows 10
Anoyerera yenyu Xbox One mitambo kuti Windows 10 PC, tablet, kana piritsi. Mitambo optimized nokuda Windows 10, kana chinyorwa uye kugoverana uchitamba mutambo nguva pamwe pakuvara Game DVR. (Broadband Internet kunodiwa.)
Nyore multitask rimwe sikirini
Snap kusvika apps mana chidzitiro, kana asike rakapotsa desktops kuti zvakawanda nzvimbo kushanda pamwe zvinhu zvaunofanira.
Gamuchirai rubatsiro kubva pachako-digital mubatsiri
Cortana kuyamura mhiri kwenyu Windows 10 mano, kuisa zviyeuchidzo, kubatsira kunyora na, kana nemitambo Chats neshamwari uye vomumhuri. (Cortana ruzivo dzinosiyana kubudikidza mudunhu uye mudziyo.)
Tiwedzere date chibatiso
Windows 10 Pro inopa encryption pamwe BitLocker ano, uye otomatiki reserved pamwe Windows Update, kubatsira kudzivirira voga mashoko. (BitLocker kunoda aivimbwa Platform Module 1,2 kana 2.0, kana USB nokupenya nemotokari.)
Nyore kuwana mafomu
Windows 10 Pro anokubvumira kusika Anwendung pachako chikamu yako Windows Store kuti kukurumidza kuwana mafomu. (Nhamba mafomu anogona akadambura kuchaenderana pamusoro shoma chisarudzo kushanda.)
Previous: Microsoft Win 10 Pro 64bit OEM Version muna Chirungu FQC08929
Next: Microsoft Win 10 Pro 64bit OEM Version muna French pamwe Serial Key paIndaneti Activation
Usati kukopa Windows 10 Professional, kombiyuta yako inofanira kuzadzikisa zvinotevera zvinodiwa:
Processor: 1 gigahertz (GHz) kana nokukurumidza.
RAM: 1 gigabyte (GB) (32-ikakuruma) kana 2 GB (64-ikakuruma)
Free zvakaoma dhisiki nzvimbo: 16 GB.
Graphics kadhi: Microsoft DirectX 9 Graphics mudziyo pamwe WDDM mutyairi.
Microsoft Win 10 Pro Italian OEM Version 1709 Ini ...